किन बनेन देश ? | रेडियो झापा 100.7 MHz.
रेडियो झापा 100.7 MHz. बिहिबार, पौष २९, २०७८ ९:२१:१६
जनता पनि कुनै कार्यालयमा जाँदा काम बनेन भने कर्मचारीलाई घुस खुवाउन पछि पर्दैन । यो नै गल्ति हो । हामी आफै गल्ति गरिरहेका छौं । भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्नु पर्ने बेलामा आफै घुस खुवाउन थाल्यौ भने हामी कस्तो समाज बनाउन खोजिरहेका छौं । यो बारे हामी नागरिक आफै सचेत र चलाखो हुनु पर्ने बेला आएको छ । मुलुक किन बनेन ? यो बारे बहस गर्न जरुरी छ । मुलुकमा दूरदर्शी नेता नजन्मेकोले देश नबनेको हो । यो साँचो कुरा हो । देशमा शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो तर शैली र ब्यवहार परिवर्तन भएन । उही शैली र ब्यवहारले मुलुकको विकास हुदैन ।
हाम्रो देश जलस्रोतको धनी देश हो । तर जलस्रोतको सही सदुपयोग हुन सकेन । सरकारले देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षा नीति बनाउन सकेन । राम्रो किसिमको शिक्षा नीति नभएर पनि मुलुकको विकास पछि परेको हो । मुलुकमा दलाल पुँजीवाद हावी भयो, स्वाधीन अर्थतन्त्र भएन त्यसैले हामी गरिब भएका हौँ । सरकारले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न सकेन । भएका उद्योगहरू सरकारले निजीकरणका नाममा सिध्यायो ।औद्योगिक नीति नबनेको कारण मुलुकको विकास नभएको हो ।